Gudoomiye Dhoobo-daareed oo arrin Dastuurka Puntland ka hor imanaysa ku tilmaamay dabaal-degga Yoga – Kalfadhi
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed ayaa si adag uga soo horjeestay dabaal-degga xuska Yoga oo Garowe lagu qabtay. Waxay ahayd munaasabad balaaran oo madaxweynaha Puntland iyo safiirka dalka India ay ka qayb-galeen.
Haween tiro badan oo ay masuuliyiin ku jiraan ayaa baraha bulshada lagu fidiyay iyagoo meel garoon ah kaga qaybgalaya munaasabadda isla markaasna jimicsiyo kala duwan samaynaya, laakiin dumarkaas si wanaagsan oo asturnaan leh ayay u lebisnaayeen. Arrinta xuska Yoga ayaa maanta baraha bulshada dood weyn ka dhalisay.
Gudoomiye Dhoobo-daareed oo arrinta si adag uga hadlay ayaa ku qoray bartiisa facebook, sidan hoose;
“Waxan aad iyo aad uga xumahay arintii shalay ka dhacday magaalada Garoowe arintaas oo salka ku haysey dhaqamo iyo Diimo kale oo aynaa lahayn, taas oo meel ka dhac ku ahayd Diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed, waxay kaloo meel ka dhac ku ahayd Dastuurka Dawladda Puntland Qodobkiisa 9-aad kaa soo qeexaya Diinta iyo dhaqanka Puntland laga oggolyahay” ayuu yiri Dhoobo-dareed.
Qodobkaas uu gudoomiyuhu cuskaday ayaa qoraya qawaaniinta iyo dhaqanka bulshada bulshada Puntland in ay saldhig u tahay Diinta Islaamku isla markaasna Diin aan tan islaamka ahayn aan lagu faafin karin Puntland. Farqada afraad ee qodobka ayaa sidoo kale dhigaysa “Waxaa reeban Xeer iyo Dhaqan kasta oo ka hor imaanaya Diinta islaamka”
Gudoomiye ku xigeenka golaha wakiillada Avv. Cabdicasiis Abdullahi Cismaan ayaa sidaas oo kale isna cambaareeyay xuska munaasabaddan Yoga oo la sheegayo in ay salka ku hayso caqiido ay aamisan yihiin qayb ka mid ah Hindida.
Wasiirka haweenka Puntland iyo ku xigeenkeeda oo ka qaybg-galay xuska Yoga iyo jimicsiga
Dadka qaar ayaase ku doodaya in arrintu tahay jimicsi muhiim u ah dadka aysanna lug ku lahayn arrimaha Diinta ee muran badan dhaliyay.